असोज १० गतेः काल बेला परेको छ, पश्चिम दिशाको यात्रा गर्नुहुँदैन, कस्तो होला राशिफल ?| Gandaki Voice
Monday, October 25, 2021 | सोमबार ०८ कार्तिक, २०७८
नेपाल आइपुग्यो एक लाख फाइजर खोप, कहिले पाउँछन् जनताले ?
गुल्मीमा डेढ करोडको धान क्षति
कात्तिक ८ गतेः सबैभन्दा राम्रो ‘अमृत’ बेलाबाट दिन प्रारम्भ भएको छ, कस्तो होला राशिफल ?
असोज १० गतेः काल बेला परेको छ, पश्चिम दिशाको यात्रा गर्नुहुँदैन, कस्तो होला राशिफल ?
आज मिति २०७८ असोज १० गते आइतबार, इस्वीसंवत सेप्टेम्वर २६ तारिक सन् २०२१, श्रीशाके १९४३, नेपाल संवत् ११४१, राक्षश नामको संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलाद्र्धमा छन् । वर्षा ऋतु चलिरहेको छ ।
चान्द्रमान अनुसार आश्विनकृष्ण पितृपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज आश्विनकृष्ण पितृपक्षको पञ्चमी तिथि रहनेछ । आज नक्षत्रमा कृत्तिका, विष्कुम्भादि योगमा वरियान, करणमा गर र आनन्दादि योगमा धूम्र रहनेछ ।
सूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २९ घटि ५९ पला अर्थात १२ घण्टा १२ मिनेटको रहनेछ । आज सूर्योदय काठमाडौं केन्द्र विन्दुमा रही बिहान ५ बजेर ५४ मिनेटमा रुद्र मुहूर्तमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ ठीक ५ः५४ बजे हुनेछ ।
मेषः आज समय खराब रहनेछ । आज पानीमा डुब्ने डर रहेकोछ विशेष सतर्क रहनुहोला । मनमा ज्यादा निराशाका भावना आउने, कसैको अप्रिय समाचार सुन्दा चित्त दुख्ने जस्ता काम हुनेछन् । कसैप्रति घनिष्ट मित्र पनि नगर्ने, कसैसंग वादविवाद र दुश्मनी काम नगरेमात्र ठूलो हानी नोक्सानीबाट जोगाउन सकिनेछ । टाढाको यात्रा पनि नगर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।
वृषः आज पनि समय अत्यन्त शुभ रहनेछ । स्वास्थ्य सन्तुलित रहने देखिन्छ । आदर–सत्कार पाइनेछ । घरमा पारिवारिक सहयोग राम्रैसंग पाइनेछ । नया“ वस्तु किन्ने, मीठो परिकार खान पाइने दिन रहेको छ । आफन्तको आगमनले घरमा खुशीयाली छाउनेछ । शत्रुमाथि आफ्नो जीत हुनेछ । समय शुभ रहेको हुनाले सही उपयोग गरेमा महत्वपूर्ण उपलव्धि हात लाग्नेछ ।
मिथुनः आज अत्यन्त खराब रहनेछ । चित्त दुख्ने समाचार सुन्नु पर्नेछ । शरीरको कुनै पनि भागमा रोग लाग्ने, दुख्ने, चोट लाग्ने संभावना बलियो छ । आम्दानीभन्दा खर्च ज्यादा भई दिने अवस्था यो हप्ता पनि रहनेछ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मुद्दा मामिलामा नजानु होला । टाढाको यात्रा गर्ने काम पनि नगर्नु नै राम्रो हुनेछ ।
कर्कटः आज आज समय शुभ छ । आरोग्यता, प्रशन्नता बढ्नेछ । गर्न खोजेका काममा आत्मविश्वासका साथ पूरा गर्न सक्नु हुनेछ । सोचेका सबै धार्मिक काममा राम्रो सफलता मिल्नेछ । कुखुरा पालन व्यवसाय तथा फ्रेस हाउस सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने आजबाट शुरु गर्नुहोला । जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि आज बैनापट्टा गर्दा राम्रो हुनेछ ।
सिंहः आज समय मध्यम खालको छ । कामबाट सन्तुष्टि मिल्ने छैन । गरेको काम बिग्रने संभावना बलियो छ । आम्दानी भन्दा खर्च ज्यादा हुने सम्भावना छ । सोचेअनुसार लाभ लिन कडा परिश्रमबाट गर्नुपर्नेछ । आज परिवारमा कचकच, साथीभाइ रिसाउने दिन पनि रहेको छ । नयाँ कामको थालनी आज नगर्दा नै राम्रो हुनेछ ।
कन्याः आज पनि समय खराब रहनेछ । आफन्त व्यक्तिसँग झगडा हुन सक्छ । जोसंग पनि कमै बोल्नु राम्रो हुनेछ । मन चञ्चल हुनाले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ला, आफूले गर्न खोजेका काममा धेरै नै विघ्नबाधा हुनेछ । कम्मर दुख्ने समस्याले तनाव बढ्नेछ । यात्रका क्रममा कसैले नशालु पद्धार्थ खुवाउन या सुँघाउन सक्नेछन् विशेष ख्याल गर्नुहोला । समय खराब रहेकाले सबै कार्यमा सतर्क हुनुहोला ।
तुलाः आज स्वास्थ्य राम्रो रहनेछैन । मिथ्या आरोप लाग्ने सम्भावना छ । आर्थिक लेनदेन कारोवार गर्दा ज्यादै सतर्क रहनुहोला । विशेषगरी आजन पानीबाट खतरा छ, सतर्क रहनुहोला । आज केही काम बन्ने, केही अधुरा रहने जस्तो छ । गाडी चलाउँदा विशेष ख्याल गर्नुहोला । समयमा खाना खान नपाइने वा गड्बडीको सम्भावना बलियो छ । सतर्क हुन आवश्यक छ ।
वृश्चिकः आज पनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । गर्न खोजेका सबै काम सफल, प्रेमी/प्रेमिकाबीच सम्बन्ध थप गाढा हुन सक्नेछ । पारिवारिक सदस्य तथा कर्मचारीबाट राम्रो सहयोग प्राप्त हुनेछ । आज रोकिएका सबै काम पूरा हुनेछन् । राम्रो समयको सही उपयोग अवश्य गर्नुहोला । नयाँ-नयाँ कार्ययोजना बनाउने दिन आज रहेको छ । हार्डवयर सम्बन्धी पेशामा उच्चतम् लाभ पाइने देखिन्छ । धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट सम्मान पाइनेछ ।
धनुः आज समय राम्रै रहनेछ । सोच्दै नसोचेको धन प्राप्ति हुन सक्नेछ । जमीन अथवा कलकारखाना सम्बन्धी काम गर्नु छ भने आजा लाभ हुनेछ । तपाईं सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने आज पैसा खूब कमाउनुहुनेछ । जताबाट पनि तपाईंलाई खुशी लाग्दा समाचार प्राप्त हुनेछन् । रमणीय कार्यमा सहभागी हुन पाइने छ । समय शुभ रहेको छ भरपूर उपयोग गर्नुहोला ।
मकरः आजको समय खराब छ । बोली वचनमा शिष्टता र सकेसम्म नरम भई काम लिनुमा नै बुद्धिमानी हुनेछ । आँपूm मातहतका कर्मचारीमा विवादको अवस्था देखा पर्नेछ, जसमा आँपूm तटस्थ रहनु नै राम्रो हुनेछ । व्यापार र व्यवसायमा आज त्यति लाभ देखापर्ने छैन । परिवारको कुनै सदस्यलाई औषधी उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यात्रामा पनि तनाव उत्पन्न हुनेछ । आज सबै कार्यमा चनाखो र सतर्क हुनुहोला ।
कुम्भः आज जन्मराशिदेखि बाह्रौं भावमा रहेको चन्द्रमाले अनावश्यक मानसिक चिन्ता थप्नेछ । नबोलाएको ठाउँमा जानुपर्नेछ । आफन्तबाटै बद्नाम तथा अपमानको सम्भावना त्यत्तिकै रहेको छ । जुनसुकै काममा अनावश्यक खर्च भै जाने अवस्था छ । समग्रमा समय खराब रहेकाले आज आर्थिक लेनदेन, टाढाको यात्रा, महत्वपूर्ण निर्णय नगर्नु नै राम्रो हुने ज्योतिष वैत्रानिक दृष्टिकोणमा देखिन्छ ।
मीनः आज समय शुभ छ । एक्कासी आम्दानी बढ्ने काम भेटिने छ । जे पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ आम्दानी राम्रै रहनेछ । नयाँ व्यवसाय आज शुरु गर्नुभएमा राम्रो हुने ज्योतिष वैत्रानिक दृष्टिकोणमा देखिएको छ । पुराना इष्टमित्र, मान्य व्यक्तिसंगको भेट उपलब्धिमूलक नै रहनेछ । आज जे काम गर्दै हुनुहुन्छ प्रतिफल राम्रै पाइनेछ । टाढाको यात्रा रमाइलो र फलदायी हुनेछ ।
साइतः आज सूर्य कन्या र चन्द्रमा वृष राशिमा छन् । त्यसैले दक्षिण र पूर्व बाहेक अन्य दिशाको यात्रा शुभ छैन । आज आइतबार परेकाले पश्चिम दिशाको यात्रा गर्दै नगर्नुहोला । यदि बाध्यता नै छ भने धार्मिक उपाय अपनाएर मात्र यात्रा गर्नुहोला । शुभ बेलामा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा प्रारम्भ गर्नुुहोला । साथै पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर पूर्व तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ । यदि तपाइँ विशेष यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ दिशामा मात्रै गर्नुपर्दछ ।
बिहान ५ः५० बजेदेखि ७ः२२ बजेसम्म उद्धेग बेला
बिहान ७ः२२ बजेदेखि ८ः५४ बजेसम्म चर बेला
बिहान ८ः५४ बजेदेखि १०ः२५ बजेसम्म लाभ बेला
बिहान १०ः२५ बजेदेखि ११ः५७ बजेसम्म अमृत बेला
बिहान ११ः५७ बजेदेखि १ः२८ बजेसम्म काल बेला
दिनमा १ः२८ बजेदेखि ३ः०० बजेसम्म शुभ बेला
दिनमा ३ः०० बजेदेखि ४ः३२ बजेसम्म रोग बेला
दिउँसो ४ः३२ बजेदेखि ६ः०३ बजेसम्म उद्धेग बेला
ट्रकको ठक्करबाट २७ वर्षीय निश्चल खनालको मृत्यु
बुटवलमा बिहानै सवारी दुर्घटनाः अनमोल थापा र निशान क्षेत्रीको मृत्यु
तिलक दाहाल: मोटरसाइकल रोके, सुत्त नदीमा हामफाले
काठमाडौं जाँदै गरेको बसमा एक्कासी आगो लागेपछि...
कास्की प्रहरीद्धारा पोखरा ५ का चन्द्रबहादुर र अर्घौंचोकका जीवन पक्राउ
कात्तिक ७ गतेः सबैभन्दा खराब राहुकाल समय पनि परेको छ, कस्तो होला राशिफल ?
पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्यो
कात्तिक ६ गतेः काल बेलाबाट दिन प्रारम्भ, अमृत बेला पनि परेको छ, कस्तो होला राशिफल ?
कात्तिक ५ गतेः चर बेलाबाट दिन प्रारम्भ, काल बेला पनि परेको छ, कस्तो होला राशिफल ?
कात्तिक ४, २०७८ बिहीबार
कात्तिक ४ गतेः काल र राहुकाल बेला परेको छ, दक्षिणतर्फ यात्रा गर्नुहुँदैन, कस्तो होला राशिफल ?
कात्तिक ३ गतेः पूर्णिमाको दिनमा पनि काल बेला र उत्पात योग परेको छ, कस्तो होला राशिफल ?